Ọchụchọ mpaghara na-eto, Are nọ na maapụ ahụ? | Martech Zone
Gbalị ịbanye na peeji nsonaazụ ọchụchọ maka otu isiokwu isiokwu nwere ike ịme ọtụtụ ọrụ. O juru m anya na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ obodo, ọ bụ ezie na, nke ahụ anaghị erite uru Google Local Business. M na-arụ ọrụ na ọkacha mmasị m Analọ ahịa kọfị Indianapolis, The Bean Cup, iji nweta ezigbo nyocha igwe ntinye… mana usoro mbu bụ iji hụ na edepụtara ha na maapụ Google:
Ọ bụrụ na ị na-eme a chọọ na Google n'ihi na ụlọ ahịa kọfị Indianapolis, tupu nsonaazụ ọchụchọ ọ bụla gbagote na eserese ngosi na ụlọ ahịa kọfị niile dị na Indianapolis.
Banye na eserese ngosipụta a abụghị okwu ewu ewu, ọ bụ naanị okwu ịdenye aha maka Google Local Business. Denye aha na ịchọpụta ebe ị nọ na Google Local Business na-etinye gị na nsonaazụ ọchụchọ Google na-ewu ewu ebe egosipụtara maapụ - yana itinye gị na Maapụ yana ọchụchọ Google Map.
Enwere otutu nhọrọ enwere - ịbugote foto, Kupọns, nọmba ekwentị, oge ọrụ, wdg. Usoro nkwado ahụ dị mfe… Google na-akpọ ekwentị akpaaka na nọmba azụmahịa ị nyere iji hụ na ị n'ezie. Ọ bụrụ n’inwe sistemụ ekwentị akpaghị aka, ịnwere ike ịbanye na Google zigaara gị kaadị nkwado. Ozugbo ị natara kaadị ahụ, banye na akaụntụ gị ma tinye koodu nkwenye ahụ.
Ihe ị na-eche? Tinye azụmahịa gị na eserese taa! Ekwuru m na ọ bụ n'efu?
Tags: maapụ azụmahịa googlegoogle mpaghara azụmahịagoogle mapGoogle+ Obodo
Nke a dị mkpa maka ụdị azụmaahịa ọ bụla. Ọ na - enye ndu gị na ndị ahịa ị nwere mmetụta na ị nọ ebe ahụ na - eche ka ha laa. Tụkwasị azụmahịa gị n’elu nsonaazụ ọchụchọ yana ihe karịrị otu nsonaazụ na-emetụta ndị ahịa gị nnukwu mmetụta. Ha enweghị obi abụọ pịa njikọ gị!
Chọọ maka ndụmọdụ ndị ọzọ ma sonyere mkparịta ụka na Startups.com!